Banyere Anyị - Zhejiang THOR Electric Co., Ltd.
Thor bụ ihe niile banyere ichebe nsogbu ndị na-emebi ike nke ike. Ọ bụ ebumnuche anyị na ebumnuche anyị iji jikọta ịma aka ndị ahịa anyị na ogo dị elu, azịza na ngwaahịa dị oke ọnụ - ahịa ndị ahịa na-akwadoghị na nkwado teknụzụ mezue.
Edebere na 2006, Thor Electric Co., Ltd. arụgoro ihe niile iji nye ọtụtụ azịza na nchedo nke mkpuchi nchedo na ngwaahịa a. Thor na-agbaso ụkpụrụ sistemụ nke mba ụwa, bụ ISO 9001 gbaara agbazi yana ụkpụrụ ọrụ anyị dị na GB18802.1-2011 / IEC61643.1.All a na-anwale ụdị na klaasị nke ndị na-egbu ọkụ na ndị na-awụli ọkụ 20KA ~ 200KA (8 / 20μS) na 15KA ~ 50KA (10 / 350μS) wee nyefee ihe niile achọrọ dabere na klaasị ha. Thor nọ na-emepụta ngwaahịa ọhụrụ iji zute iwu RoHS kemgbe 2006. Thor na-aga n'ihu itinye aka na RoHS na-agụnye mgbalị ndị na-aga n'ihu iji belata ọnụnọ nke ihe ndị dị ize ndụ na imewe na imepụta ọnụ ọgụgụ na-eto eto nke ngwaahịa ndị a ma ama.
Zhejiang Thor Electric Co., Ltd.na-agba mbọ imezu ihe iwu European Union's Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) nyere. Ntụziaka a chọrọ ndị na-emepụta eletriki na eletrọniki iji kwụọ ụgwọ maka ịlọghachi maka iji ma ọ bụ imegharị ngwaahịa ha tinye na EU ahịa mgbe 2005.